Kuyini ukushintshaniswa kwe-forex? | Ezezimali Zomnotho
Abantu abaningi, ngisho nalabo asebevele batshale imali emakethe yezimali, abangazi ukuthi ukushintshaniswa kwe-forex kuyini. Eyaziwa nangokuthi amaphuzu e-swap, ama-swap commissions noma i-rollover ku-forex. Yize kuliqiniso ukuthi akuthinti ukusebenza kwe-scalping noma i-intraday, kuyinkokhelo yokurekhodwa lapho isikhundla sihlala sivulekile kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo. Ukukhokhiswa okungaba kuvuna wena bobabili (bayakukhokhela) futhi kubhekiswe kuwe (uyakukhokha).
Ukubalwa kwemali kwazo zonke izindleko nemali engenayo kubalulekile emnothweni onempilo. Ngakho ake sibone ukuthi ukushintshaniswa kuyini, kukuthinta kanjani, ungazuza kanjani noma uzilimaze, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi ukushintshaniswa kubalwa kanjani ku-forex.
1 Yini ukushintshaniswa?
1.1 Ukushintshana kuvela kuphi ku-forex?
1.2 Ukushintshanisa / ukudlulisa kumthengisi
2 Ungasizakala kanjani ngokushintshana
3 Ukushintshaniswa kubalwa kanjani ku-forex?
4 Iziphetho zokugcina
Abanye abantu bakubiza ngokuthi yi-currency rollover. Ukushintshaniswa umehluko phakathi kwamanani wenzalo yamazwe amabili. Kungaba okulungile ukusho ngaleso sikhathi, ukuthi umehluko phakathi kwezinga lenzalo yamazwe. Kodwa-ke, njengoba "ama-currency pair" ethintwa ku-forex, kungcono ukusho ukuthi umehluko uphakathi kwamazwe amabili. La mazwe womabili abandakanyeka kumbhangqwana othile wemali.
Le nzalo yaminyaka yonke, Kufanele ikhokhelwe ngomsebenzi ngamunye esihlala siwuvule kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo futhi nsuku zonke. Futhi ikhona ngoba amanani wenzalo yokuxhasa izwe awafani phakathi kwabo. Sinezindawo ezinamanani aphansi kakhulu futhi amabi kakhulu, njengendawo ye-Euro (imali ye-EUR), iSwitzerland (imali ye-CHF) noma iJapan (uhlobo lwemali lwe-JPY), nezinye eziphakeme, njengeRussia (imali yeRUB). Kunamacala angawodwa amazwe anenzalo enkulu, njenge-Argentina. Vuliwe IdathaMacro, iwebhusayithi engiyincomayo nengivame ukuyisebenzisa ukubheka imininingwane evela kwamanye amazwe, uzokwazi ukuthola amanani enzalo akhona ngaso sonke isikhathi.
Ukushintshana kuvela kuphi ku-forex?
the umehluko ezingeni lenzalo ye-Central Bank lapho imali ngayinye ihambelana khona. Ukusiqonda, ake sithathe isibonelo ngeDola lase-Australia (i-AUD) ne-Swiss Franc (CHF). Phakathi kwabanye, ngoba i-AUD / CHF pair yiyona engisebenza kakhulu kuyo. Cishe iminyaka eyi-2 ngihlala ngivula imisebenzi yokuthenga. Lesi sibonelo cishe:
Khumbula ukuthi Imali yokuqala yesiphambano semali yisisekelo semali, kuleli cala i-AUD. Owesibili uhlobo lwemali lesilinganiso, kulokhu i-CHF.
I-AUD ingaphansi kwezinga lenzalo ka-1%, kanti i-CHF inezinga le -50%. Umehluko wayo ophelele ngu 1’50-(-1’25)=2’75%. Lokhu kungaba yisithakazelo kithi, uma i- isikhundla siyathengwa. Ngakolunye uhlangothi, uma sithengisa, kuzofanele sikhokhe le nzalo.
Uma, ngokuphambene nalokho, sithathe isiphambano ngenye indlela (CHF / AUD) sizoba nomehluko we (-1'25) -1'50 = -2'75%. Ngakho-ke, endaweni ende besizokukhokhela lokho kushintshaniswa, kuthi uma kwenzeka kuthengiswa sikuthole.
Khumbula ukuthi kohlamvu lwemali lokuqala uma uyithenga uthola inzalo yakho, kuthi kweyesibili uma uhlukana nayo uyikhokhe. Ngokuphambene nalokho, uma uthengisa, ohlamvwini lokuqala ukhokha inzalo, kuthi kowesibili uyithole.
Izinga lesithakazelo livame ukuhluka ngokuhamba kwesikhathi. Ezinye zizinzile kakhulu, ezinye azizinzile (qaphela nalokhu, asifuni ukwethuka).
Kuze kube manje, ungabona umqondo ngemuva kokushintshaniswa. Uma uthatha isilinganiso senzalo sezimali ezibandakanyeka esiphambanweni ngasinye njengesethenjwa, uzobona ukuthi umdayiseli wakho ukukhokha kanjani noma akukhokhise ngokuya ngokuthi ubuke ini.
Ukushintshanisa / ukudlulisa kumthengisi
Lokhu kubalulekile. Umthengiseli akakhombisi iphesenti, kepha kunalokho ngama-pips (ngokuthanda kwakho noma ngokumelene). Futhi ngaphezu kwalokho, uzokubona lokho ayilingani, isikhundla eside asifani nesikhundla esifushane. Akufanele yini kube okufanayo? Yebo kunjalo. Okwenzekayo kuleli cala ukuthi umthengisi ukhokhisa ikhomishini kumuntu ngamunye nakubanikezeli bayo bempahla. Futhi kufanele kuqondwe, ngoba kuyibhizinisi lakho futhi siyasizakala ngezinsizakalo zakho.
Endabeni yami, umthengisi wami ungikhokhela isikhundla eside (Shintsha isikhathi eside) ku-AUD / CHF, ama-pips we-0 ngosuku. Ngemuva kwalokho, uma ngivula indawo emfushane (Shintsha iDemo) ngizokhokha -44 pips ngosuku. Uma kungekho khomishini ekhokhiswayo, mhlawumbe singabona izibalo zamapayipi eziqondile, ezinjengo-0 no -71'0,55 ngokwesibonelo, kuya ngokuthi bekuthengiwe noma kuthengiswa yini.
Ungasizakala kanjani ngokushintshana
Qaphela, ngoba le yinkemba esika nhlangothi zombili. Ngiyachaza. Isikhathi sokuqala lapho nganginombono wokushintshaniswa, umfutho wami wokuqala kwakuwukufuna imali ezokhokha amapayipi amaningi ukugcina isikhundla esivulekile. «Ngizoshiya isikhundla sami sivulekile ... Nsuku zonke ngizonwaya amapipi amaningi ... Futhi ngizoba yinkosi yendawo yonke». Ungaze ucabange ngakho!
Ungazitholela ngokwakho ukuthi indlela ye- izingcaphuno zalezoziphambano zemali ezinokushintshisana okuphezulu ohambeni olude. Uma uzibheka, engikukhuthaza ukuba ukwenze, uzobona ezinye zazo ihluzo ezikusabisayo. Ngabe lokho kusho ukuthi kufanele sikhohlwe ngokushintshana? Cha cha, kude nayo! Kepha Yinkemba esika nhlangothi zombili, futhi kufanele ngikuxwayise. Izintshisekelo azihluki ngoba ziyenzeka, kepha leyo enye indaba.
Ukushintshaniswa kungakuzuzisa, noma kukusize, ngaphandle kwesiqinisekiso sempumelelo ephelele, ekwenzeni izinqumo yokuhweba nge forex yesikhathi eside.
Ukushintshaniswa kubalwa kanjani ku-forex?
Ake sicabange ukuthi sifuna ukuhweba ukuthenga nge-EUR / USD, futhi ukugcina izinombolo zilula, ake sicabange ukuthi sithenga i-mini-lot, elingana no-10.000 USD.
Ipayipi ngalinye, noma yini efanayo, i-0'0001 ngayinye yesilinganiso se-EUR / USD, ilingana ne- $ 1.
Izinga lenzalo e-USA liphakeme kunasezindaweni ze-Euro.
E-United States, ngokwesibonelo, angama-2% naku-Euro Zone 25% (Njengesibonelo, angisho ukuthi manje lezi).
Lapho uthenga i-EUR sizothola u-0%, futhi njengoba sihlukana ne-USD sizokhokha u-2%. Okusho ukuthi sizokhokha u-25% ngonyaka we $ 2. Ilingana ne- $ 25.
$ 225 ngonyaka, lokho kungu- $ 0 ngosuku, okuma-pips angahumushela ku -62 pips. Kubi ngoba kulokhu, yilokho okufanele sikhokhe. Futhi ukwengeza ukuthi umthengisi uzokwengeza amakhomishini kithi, inani eliphakeme lingaphuma, lamapayipi we-0 noma we-62.
Ukuze amapayipi / amaphuzu okushintshana ahambe esivuna, kuzofanele senze ukuthengisa esikhundleni sokuthenga, kulokhu.
Uma kwenzeka usebenzisa elinye ibhangqa lemali, ama-pips azohlala akhokhelwa imali ecashuniwe. Ngemuva kwalokho kufanele wenze ukuguqulwa kwemali yakho, ukwazi inani eliqondile ozolithola.
Sibonile ukuthi ukushintshaniswa kwe-forex akunamfihlakalo, ngaphezu kwesibalo esifanele ukwazi ukuthi kusithinta kanjani. Ini Kungasizuzisa futhi kusilimaze, kuya ngezinqumo zethu. Futhi leyo yinto okufanele uyikhumbule, ikakhulukazi ekusebenzeni kwe-forex yesikhathi eside. Futhi kubalwa okuvumelekile kwezinsimbi ezifana negolide nesiliva.
Kukhona nabathengisi abasebenzisa amaphuzu wokushintshana njengokudluliswa kwezinye izinto, ezisebenza kumaCFD. Uma nje sihamba isikhathi eside, kumele sinake lezozindleko zansuku zonke esizozikhiqiza ngokugcina ukuhweba okuvulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Kuyini ukushintshaniswa kwe-forex?